नेकपा सचिवालय बैठकः कार्यदलको म्याद थप गर्ने नगर्नेबारे विवाद, कार्यदल विघटन गर्ने ओलीको प्रस्ताव
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बैठकमा सांगठनिक एकताबारे गृहकार्य गर्न गठित कार्यदलको म्याद थप गर्ने नगर्नेबारे विवाद उत्पन्न भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को सचिवालय बैठक केहीबेरमा बस्दैछ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा पार्टीको एकता कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल संयोजकत्वको ९ सदस्यीय
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं नेपाल–अस्ट्रियावीच द्धौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ६०औं वर्षगाठको अवसर पारेर अस्ट्रियाली विदेशमन्त्री करिन किनाइसल नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । सो मुलुकबाट ४ दशकपछि नेपालसँगको उच्चस्तरिय भ्रमण तय भएको
अष्ट्रेलियामा अलपत्र विद्यार्थीको उद्धार गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौँ, (नेस) । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसले अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न गएका एक हजार भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी विचल्लीमा परेकाले उनीहरुको उद्धार र उचित शैक्षिक प्रबन्धका लागि तत्काल अष्ट्रेलिया सरकारसँग
मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौँ । नीति निर्माणमा जुटनुपर्ने मन्त्रीहरुको दिन दैनिक उदघाटन, सभा र समारोहमै बित्ने गरेको छ । उनीहरू यस्ता औपचारिक कार्यक्रममा रमाउँदा जनताले सेवा पाउनुपर्ने मन्त्रालयका कामहरू नै प्रभावित
ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं । शिक्षा ऐन लागू भएको ४७ वर्षपछि सो ऐन खारेज हुने भएको छ । शिक्षा ऐनसंगै ५४ वर्ष अघि बनेको छात्रवृत्ती, ३० वर्ष अघि बनेको प्राविधिक शिक्षा तथा
पर्सा । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउन घात अन्तरघात गर्ने सबैलाई अनुशासनको कारवाही हुने बताउनुभएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस पर्साले आज वीरगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता
काठमाडौँ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम राजविराजमा संचालन भईरहेको बृहत निस्शुल्क संयुक्त शल्य चिकित्सा घुम्ति शिविरको अवलोकन गर्नुभएको छ । थापाले त्यहाँको अवलोकन पत्तचात खोटाङ्गस्थित शेर गणको समेत
भद्रपुर । कारागार प्रशासन र कैदीबन्दीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । झापा कारागारको प्रशासन पक्षप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै कैदीबन्दीहरुले नाराबाजी गरेपछि विवाद सार्वजानिक भएको हो । कारागारका जलेर राजु दाहालले ज्यादती
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललेनेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको फागुन ७गतेको निर्णयले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका प्रहरी अधिकृतहरुलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा दर्ज्यानी
त्रिवि मानविकी संकायका सहायक डिन बलराम रायलाई विद्यार्थीहरुले दले कालोमोसो
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतको मानविकी संकायका सहायक डिन बलराम रायलाई आफ्नै बिद्यार्थीलाई अभद्र ब्यवहार गरेको भन्दै बिद्यार्थीले कालो मोसो दलेका छन । सहायक डिन रायले रितुल यादवलाई
मनोज भट्ट, महेन्द्रनगर । महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरण अन्र्तगत मुल नहर निर्माणको काम सुरु भएको १२ वर्षमा १३ किलोमिटर नहर निर्माण हुँदा निर्माणको काममा बजेट अभाव भएको छ ।
कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज । नेपाली काग्रेसका सभापती तथा पूर्व प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले लगानी मैत्री वतावरण बनाउँन नसकेको कारण उद्योग धन्दाको विकास हुन नसकेको बताउनु भएको छ । वीरगन्जको
बाइडबडी काण्डका मन्त्री झण्डा हल्लाएर हिडिँरहनु दुर्भाग्य– सांसद यादव
काठमाडौ. । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादबले वाइडबडी घोटाला काण्ड लागेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रबिन्द्रप्रसाद अधिकारी अझैपनि घमण्डका साथ झण्डा हल्लाएर हिडिँरहनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभएको छ
अष्ट्रेलियामा अलपत्र विद्यार्थिको उद्धार गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौ (नेस) प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसले अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न गएका एक हजार भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी विचल्लीमा परेको भन्दै उनीहरुको उद्धार र उचित शैक्षिक प्रबन्धका लागि तत्काल अष्ट्रेलिया सरकारसँग
सिहदरबारको ढोकैमा गरिबीको चपेटा
भगवती तिमल्सीना, काठमाडौ । सिहदरबारको ढोकै अगाडि अझ स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिसर हुँदै बग्ने टुकुचा खोलामा प्रवेश त के नजिकैबाट हिड्दा समेत नाक थुन्नुपर्ने अवस्था छ । तर बुधबार दिउसो झण्डै
अख्तियार कार्यालय अगाडि विवेकशील साझा पार्टीको प्रर्दशनः ३० जना भन्दा बढी कार्यकर्ता समातिए
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, नक्साल अगाडि प्रर्दशन गरिरहेको विवेकशील साझा पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । बढ्दो भ्रष्टाचार र बेथितिको छानबिन माग गर्दै
विभिन्न मन्त्रालयका ६ सचिवको सरुवा, को कहाँ ?
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । सरकारले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटासहित ६ जना सचिवहरूको सरुवा गरेको छ । सचिव देवकोटालाई पर्यटन मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । पर्यटन
‘म बनाउँछु मेरो जुगल’ भन्दै जागे विद्यार्थी
नानीराम नेपाल, सिन्धुपाल्चोक । – खेर गइरहेका पानीले जुगललाई झिलिमिली बनाउँछौं । जल, जमिन, जडिवुटी र जंगलको उपयोग गर्दै जुगलको मुहार फेर्नेछौं । – कृषि उत्पादन बढाउँदै आयआर्जनमा लाग्नुपर्दछ, पर्यटन
धनवीर दाहाल,रुकुम रुकुम पुर्वको पुथाउत्तरगंगा गाँउपालिका ११ मा शौचालय निर्माणको बिषयमा बिवाद हुँदा वडा अध्यक्ष जयकुमार बुढामगरले स्थानीय महिलालाई कुटपिट गरेका छन् । निर्माणाधिन महिला भवनको शौचालय निर्माणको बिषयमा विवाद